Home Wararka Dibada Dowladda Gambia oo maxkamadeyneysa Madaxweynihii hore ee Dalkaas Yahya Jammeh.
Dowladda Gambia ayaa Sheegtay in ay aqbashay talo uu soo jeediyay guddiga runta iyo dib u heshiisiinta oo ah in Maxkamad la geeyo Madaxweynihii hore ee Dalkaas Yahya Jammeh oo dibad-joog ah kuna eedeysan dambiyo kala duwan.
Yahya Jammeh ayaa loo heystaa in uu sababteeda lahaa Dad lagu dilay Dalkaas oo intooda badan naftooda u waayay ka aragti duwanaanta maamulkii uu maraha u hayay inkasta oo uu beeniyay mar wax laga weydiiyay eedahaas.
Dawda Jallow, Xeer ilaaliyaha guud ee Gambia ayaa sheegay in dacwad-ooge gaar ah uu kormeeri doono kiisaska loo heysto oo caddeymo loo hayo qaarkood kuwaas oo dhacay intii u dhaxeysa 1994tii ilaa 2017kii.
Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in Guddiga Runta, Dib u heshiisiinta iyo Magdhawga ee loosoo gaabiyo (TRRC) uu hayo warbixinno dhammeystiran oo billaw u noqon kara dacwad lagu daah-furi karo kiisaska loo heysto Madaxweynihii hore ee Gambia Yahya Jammeh.
Kiisaska loo heysto Madaxweynihii hore ee Gambia Yahya Jammeh waxaa kamid ah in uu mas’uul ka ahaa 44 dambi oo ka dhan ah Suxufiyiinta, Askar hore oo howlgab noqotay, Siyaasiyiin kasoo horjeeda iyo Dad rayid ah.
Waxaa jira kooxo gacansaar la lahaa maamulka Jammeh oo ku kacay dilal bareer ah, jirdil iyo kufsi loo geystay tiro Haween ah oo dhibaato maskaxeed kasoo gaaray falalkaas ay kala duwan ee loo geystay muddadii muddo xil-heynta Madaxweynihii hore ee Gambia.
Yahya Jammeh oo xilka Afgambi ku qabsaday 1994tii ayaa sanadkii 2016kii looga adkaaday doorasho ka dahcday Dalka Gambia ee dhaca Galbeedka Afrika, waxa uu u baxsaday waddanka Equatorial Guinea kaddib markii lagu qasbay in uu aqbalo natiijada doorashada uu uga adkaaday Aadama Barrow.
Previous articleIOM: ku dhawaad 600 oo tahriibayaal ah oo lagu la’ yahay Xeebaha Liibiya & Tunisia.
Next articleXasan Sheekh Maxamuud: “Hadafkeenu waa in aan ka gudubnaa Doorasho Dadban”.
Xiisad Mar Kale Ka Soo Cusboonatay Xadka Suudan Iyo Itoobiya